November 2014 - သန်လျင်သားနည်းပညာ
Huawei Honor 3C 4G H30-L02 KitKat Official Firmware
Download Android ICS 4.0.4 Stock Firmware for Huawei G510 smartphone
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ဒီနေ့ Huawei ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဘော်ဘော်တွေ အတွက် Huawei Android ICS 4.0.4 Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊အောက်မှာ အသေးစိတ်ဖတ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 23:55:00
Labels: Huawei Firmware (ဆိုင်ရာ), Huawei Honor 3C 4G H30-L02 KitKat Official Firmware
မြန်မာစာမပါသော Android ဖုန်းတချို့တွင် Built In မြန်မာစာစနစ်ထည့်သွင်းနည်း
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ တင် ပေးလိုက်တဲ့ နည်းပညာလေးကတော့ Built In မြန်မာစာမပါသော Android ဖုန်းတချို့တွင် Built In မြန်မာစာစနစ်ထည့်သွင်းနည်း လေးကို မျှ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:14:00
Labels: မြန်မာစာမပါသော Android ဖုန်းတချို့တွင် Built In မြန်မာစာစနစ်ထည့်သွင်းနည်း
Lenovo phone firmware(ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ခုတင်ပေးလိုက်လေးကတော့ ndroid KitKat 4.4.2 firmware for Lenovo A808Tလေးပါ လိုအပ်တဲ့သူင်ာချင်းတွေအောက်မှာ အသေးစိတ်ဖက်ပြီးဒေါ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 08:25:00
Labels: Lenovo phone firmware(ဆိုင်ရာ)
Download Android Jelly Bean 4.2.2 Stock Firmware for Lenovo S898t smartphone
မင်္ဂလာပါ ခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကတော့Android Jelly Bean 4.2.2 Stock Firmware for Lenovo S898t ပါ လိုအပ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေအောက်မှာ version အသေးစိတ်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:47:00
Huawei Firmware (ဆိုင်ရာ)
Download latest Jelly Bean 4.2.2 Stock Firmware for Huawei Honor 3C smartphone
မင်္ဂလာပါ ဒါလေးကတော့ Huawei Honor 3C smartphone Firmware လေးပါ အောက်မှာ အသေးစိတ်ဖတ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:25:00
Labels: Huawei Firmware (ဆိုင်ရာ)
Download Android 2.3 stock firmware for Lenovo A238T smartphone
မင်္ဂလာပါ ဒါလေးကတော့Android 2.3 stock Lenovo A238T smartphone firmware လေးပါ အောက်မှာ version အသေးစိတ်ကြည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေ ဒေါင်း...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:17:00
Download Android 2.2 stock firmware for Lenovo Lephone 3GW101 smartphone
မင်္ဂလာပါ Lenovo smartphone ကိုင်ဆောင်တဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် firmware များကိုတက်နိုင်သလောက်ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့ဘော်ဘော်တွေတော့အောက်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:54:00
Download Android Jelly Bean 4.2.2 stock firmware for Lenovo P780 smartphone
မင်္ဂလာပါ ခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Android Jelly Bean 4.2.2 Lenovo P780 firmware လေးပါနော် လိုနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအောက်မှာ အသေးစိတ်ကြည်ပြီးဒေါင်းသွာ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:18:00
Download Android Jelly Bean 4.2.2 stock firmware for Lenovo S658T smartphone
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘော်ဘော်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးဒေါင်နိုင်အောင်ခုနောက်ပိုင်းမှာ firmware များကိုတက်နိုင်သလောက်ရှာပြီးတင်ပေးနေရတဲ့မတွ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:29:00
Download Android Jelly Bean stock firmware for Lenovo S720i smartphone
မင်္ဂလာပါ Lenovo S720i firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် မူရင်လင့်လေးတိုင်းတင်ပေးလိုက်တာပါ အောက်မှာအသေးစိတ်ဖက်ပြီးလိုရင်လွာ်ကူစွာဒေါင်းသွားပါ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 01:43:00
Root tool (ဆိုင်ရာ)
Download latest Vroot version 1.7.7.7592
မင်္ဂလာပါ Vroot လိုနေတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် Vroot version 1.7.7.7592 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအောက်မှာဒေါင်းသွားလိုက်ပါ.... ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 23:38:00
Labels: Root tool (ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ ဒါလေးကတော့ Lenovo A238T smartphone firmware လေးပါ အောက်မှာမူရင်တိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အသေးစိတ်ဖတ်ပြီးလိုရင်ဒေါင်းသွားပါ ... ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:44:00
Download Android stock firmware for Lenovo A238T smartphone
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:07:00
Acer firmware (ဆိုင်ရာ)
Download Android 4.0 ICS stock firmware for Acer Iconia Tab A501 tablet
မင်္ဂလာပါ Acer firmware tablet လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် အောက်မှာလွယ်လွက်ကူကူဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ် လုပ်နည်းကိုင်နည်းလေးတွေလဲအောက်မှာမူရင်တိုင်းေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:17:00
Labels: Acer firmware (ဆိုင်ရာ)
Samsung Phone firmware(ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော် Samsung Phone ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက် Samsung Phone firmware (၅) အနေနဲ့ ထပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့ firmware ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:21:00
Labels: Samsung Phone firmware(ဆိုင်ရာ)
download God of War Chains of Olympus Para Android
မင်္ဂလာပါ နမည်ကြီးဂိမ်းလေးဖြစ်တဲ့ God of War လေးရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် စော့နည်းလေးတွေတော့လာမမေးပါနဲ့နော် ကြိုပြောလိုက်ပါရစေ ကျွန်တောသိပ်မဆော့ပါ....
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:28:00
Labels: Android Game(ဆိုင်ရာ)
Samsung Phone firmware များ (4)
မင်္ဂလာပါ ဘော်ဘော်တွေအတွက် Samsung Phone firmware နောက်ဆပ်တွဲ (4) ဆိုပြီထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် မိမိတို့လိုနေတာလေးတွေကိုပါရင်တော့လွယ်ကူစွာ န...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 02:00:00
Android App (ဆိုင်ရာ)
Root ဖောက်ထားတာတွေကိုဖျက်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းအတွက်-Root Cleaner v3.4.1 APK
မင်္ဂလာပါ ဖုန်း ကိုင်ဆောင်းထားသောဘော်ဒါတွေRootCleaner( v3.4.0)(v3.4.1)အဟောင်းလေးနဲ့သစ်လေနှစ်မျိုးလုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မူရင်းလေ့လာချင်ရင် ဒီနေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 04:40:00
Labels: Android App (ဆိုင်ရာ)
Samsung Phone firmware များ (3)
မင်္ဂလာပါ Samsung Phone ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Samsung Phone firmware များ (3) ဆိုပြီးထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခွဲခွဲပြီးတင်ပေးနေရတယ်ဆ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 06:19:00
Samsung Phone firmware များ (2)
မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ရသလောက်လေး Samsung Phone ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဘော်ဘော်တွေ အတွက် ထပ်ပြီးရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် မနေ့ကလဲတင်ပေးထားတယ် နောက်လဲရှာပြီးတင...
Samsung Phone firmware များ (1)
မင်္ဂလာပါ ဒီနေတော့ Samsung Phone ကိုင်ဆောင်နေသူတွေ အသုံးလိုနေသူတွေအတွက် firmware များရှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်တဲ့ firmware များကို နမည်အလို...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:06:00
မင်္ဂလာပါ 3D Matrix ဒီဇိုင်းနဲ့ အရမ်းလန်းတဲ့ Advanced Uninstaller Pro 11.40 ကိုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်။Uninstaller tool တခုထဲမဟုတ်ဘဲ အခြား Optimi...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 08:04:00
Labels: Uninstaller (ဆိုင်ရာ)
WinRAR 5.11 x64 and x86 (incl. serial key)
မင်္ဂလာပါ RAR,ZIP,TAR,TGZ,ISO...စတဲ့ဖိုင်များကို extract လုပ်ရန်နဲ့ ၎င်းဖိုင်များအဖြစ် Archive လုပ်နိုင်တဲ့ WinRAR 5.11 x64 and x86 နောက်ဆုံးထ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 07:44:00
Labels: winrar (ဆိုင်ရာ)
Video Booth Pro 2.6.1.6 + Crack
မင်္ဂလာပါ Screen Snap လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလေး တခုပါ။မိမိ Record/Snap လုပ်ချင်တဲ့ Screenများကို Video အဖြစ်၎င်း၊Image အဖြစ်၎င်း Capture လုပ်ယူနိုင်ပြီး ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 07:38:00
TeamViewer 9.0.32494 Enterprise + Lifetime Activator
မင်္ဂလာပါ Online ဖြင့် Remote Control,Meeting လုပ်ပြီး ကွန်ပြုတာတလုံးနဲ့တလုံး ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ TeamViewer 9.0.32494 Enterprise ကို...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:09:00
Maxidix Wifi Suite 14.8.10 Latest PreActivated
မင်္ဂလာပါ Available ဖြစ်နေတဲ့ WiFi Connections များ၊Share ပြန်လုပ်ပေးထားတဲ့ WiFi Connection များကိုဖေါ်ပြပေးပြီး Auto Connection ရအောင် လုပ်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 05:22:00
LMSOFT Web Creator Pro 6.0.0.10 Portable
မင်္ဂလာပါ Website တခုရဲ့ Template,Logo,Menu,Sidebar..စသည်တို့ကို ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲပြုပြင်နိုင်တဲ့ Web Creator Pro ကိုပြန်လည်တင်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:34:00
Internet Cyclone 2.22 (Crack) PreActivated
မင်္ဂလာပါ WiFi,Wireless,WLAN Internet Connections အားလုံးရဲ့ Problems များကို Fix လုပ်ပေးပြီး Internet Speed ကိုနဂိုမူလထက် ပိုမြန်အောင် Twea...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 08:38:00
Hard Disk Sentinel PRO 4.50.9 Beta (Crack) PreActivated
မင်္ဂလာပါ Windows OS အားလုံးရဲ့ HDD,SSD,External Disks များကို Manage and Control လုပ်ပေးတဲ့ Hard Disk Sentinel PRO ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Hard ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 08:28:00
Firecoresoft Slideshow Fairy 1.0.4 + Key
မင်္ဂလာပါ အပျော်တမ်း Slideshow လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဓါတ်ပုံ၊ရုပ်ပုံများကို Slideshow Backgrond အမျိုးမျိုးနဲ့ MP3သီချင်းနောက်ခံများထည့်...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 21:33:00
The Dark Knight Rises v1.1.3 [Apk+Data]
မင်္ဂလာပါ game ဝါဒနာရှင်ညီလေးတွေအတွက်အလန်းလေးဖြစ်တဲ့ လင့်နို့လူသား game လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် The Dark Knight Rises သိထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလဲရှိေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 03:25:00
Windows 8.1 Pro WMC Sweet Dream (x86-x64) Activated ဖြစ်ပြီး
မင်္ဂလာပါ Window 8.1 နောက်ဆုံးထွက် ဒီဇိုင်းအသစ်လေးနဲ့ ထွက်လာပါတယ်။ ဒီ Version မှာတော့ အရမ်းလန်းတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံလေးတွေ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 20:57:00
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ညီငယ်လေးတွေ မသိသေးတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်သိထားသလောက် ကလေးအကွပ်လေးနည်းပညာတစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တဲ့ window ဖိုင်ဖြည်နည်း(Burn)နည်း လေးတ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:42:00
မင်္ဂလာပါ အသစ်တွေဘယ်လိုကောင်းကောင်း အဟောင်မှာဘဲတဝဲဝဲလည်..ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အတွက်Microsoft Office 2007 Enterpriseကိုဘဲတင်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ.....
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 21:14:00
AnyMP4 Video Converter Platinum 6.1.18.16548 Multilanguage + Crack
မင်္ဂလာပါ Video Converter ဆော့ဝဲလေးတခုဖြစ်တဲ့ AnyMP4 Video Converter Platinum ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်များကို MP4, MKV, M4V, FLV, ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 01:25:00
Windows7all Edition X86 & X64 Bit Activated
မင်္ဂလာပါ တောင်းထားတဲ့ညီလေးအတွက် window7all Edition X86 & X64 Bit လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ဒီ window7 လေးကကျွန်တော်သုံးနေကျပါသဘောလဲကျလို...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 09:55:00
Sony Root လုပ်နည်း(ဆိုင်ရာ)
sony ဖုန်းဗားရှင်း 4.4.4 root ဖောက်နည်း
မင်္ဂလာပါ sony ဖုန်းဗားရှင်း 4.4.4 root ဖောက်နည်းလေးတောင်းထားတဲ့ညီလေးတွက်ရှာပြီတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲမစမ်းဖူးပါဘူး ဒါပေမယ့်လိုက်ကြည့်ပြ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 10:51:00
Labels: Sony Root လုပ်နည်း(ဆိုင်ရာ)
N.O.V.A.3- Near Orbit...(စက်ရုပ်ဂိမ်း)
မင်္ဂလာပါ ဂိမ်းကောင်းကောင်းတွေမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘော်ဘော်တွေအတွက်N.O.V.A.3- Near Orbit... စတ်ရုပ်သနပ်ပြစ်ဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.ဆော့ရတာလဲတေ...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 23:10:00
Android Messenger Apk(ဆိုင်ရာ)
မင်္ဂလာပါ ဒါလေးကတော့အားလုံးသိကြမှာပါ မသိမသာနမည်ရလာတဲ့ WeChat(Version: 5.2) 2014 အသစ်လေးထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ ဒီကောင်းကလဲ facebook နည်းပါး...
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 11:25:00
Labels: Android Messenger Apk(ဆိုင်ရာ)
မြန်မာစာမပါသော Android ဖုန်းတချို့တွင် Built In မြ...
Download Android 4.0 ICS stock firmware for Acer I...
download God of War Chains of Olympus Para Android...
TeamViewer 9.0.32494 Enterprise + Lifetime Activat...
Hard Disk Sentinel PRO 4.50.9 Beta (Crack) PreActi...
Windows 8.1 Pro WMC Sweet Dream (x86-x64) Activate...
AnyMP4 Video Converter Platinum 6.1.18.16548 Multi...
WhatsApp Messenger(Version: 2.11.422)
Facebook Messenger Apk (All Android)
Command & Conquer Generals (pc)game
Google Play Store v4.8.20 Patched + Installer- And...
Auslogics File Recovery 5.0.0.0 (Crack) PreActivat...
Corel PaintShop Pro X7 17.0.0.199 (keygen CORE)
Windows 8.1 Enterprise Update October 2014 ( Octob...
iPhone / iPad အသုံးပြုနည်းများ
SoundTaxi 3D Video Player 4.5.3.1 + Crack
Macgo Windows Blu-ray Player 2.10.2.1547 + Crack
Leawo Blu-ray Player 1.5.0.0 Multilingual + Key
Flash Player Pro 5.96 (Crack) PreActivated
ArcSoft TotalMedia Theatre 6.7.1.199 Final [ENG] [...
Flash Player Pro 5.7+Key
DVDFab Media Player PRO v2.4.3.5 Multilingual
DivX Plus 10.0.1 Build 1.10.1.362+Keymaker
Nuance PDF Converter Enterprise 8.2 Multilingual +...
WinRAR 5.11 (x86-x64) Incl Crack
RAR Password Unlocker 5.0 Final
Android ဖုန်းများအား ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root ဖေါက်ပြီ...
iOS 8.1 ကို မြန်မာ စာအဆင် ပြေစွာ သွင်းယူ နည်း.
Foxit PhantomPDF Business v6.1.3.0321 + Patch REPT...
ABBYY FineReader 12.0.101.264 Professional + cRACk...